अयोधिप्रसाद यादवले खोजे सम्मानजनक व्यवस्थापन - Everest Dainik - News from Nepal
अयोधिप्रसाद यादवले खोजे सम्मानजनक व्यवस्थापन
काठमाडौं, पुस २४ । प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आफ्नो ‘सम्मानजनक व्यवस्थापन’ खोजेका छन्।
संविधानतः दोहोर्‍याएर अन्य संवैधानिक निकायमा जान नमिल्ने भएकाले यादबले सम्मानजनक व्यवस्थापनको खोजी गरेका खुल्न आएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाश तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
याे पनि पढ्नुस प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको घरमा बम विस्फोट
२०७५ चैत्र १० सम्म कार्यकाल भएका डा. यादबले निर्वाचन सम्पन्न गराएको भन्दै सम्मानजनक व्यवस्थापन खोज्दा मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको श्रोतले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट श्रोतका अनुसार डा. यादबले सम्मानजनक व्यवस्थापनसम्मको जिम्मेवारी दिएर निर्वाचन सम्मन्न गराएको योगदानको सम्मानसमेत गर्नुपर्ने इच्छा देखाएका छन्।
याे पनि पढ्नुस प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकी बुहारी पनि सांसद